Esona software siphambili kunye nezixhobo ezikwi-Intanethi zeenkampani zohambo nezokhenketho ngo-2021
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Technology » Esona software siphambili kunye nezixhobo ezikwi-Intanethi zeenkampani zohambo nezokhenketho ngo-2021
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Indawo yeendwendwe • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Technology • Iindlela zokuHamba | Iingcebiso Zohambo • Iindaba ezahlukeneyo
Eyona nkqubo yokubhukisha ikwi-Intanethi
Kwilizwe lanamhlanje lobugcisa obuphezulu, isoftware yomntu wesithathu kunye nezixhobo zincedile amashishini amaninzi ukukhulisa ukuthengisa kunye nenkxaso yabathengi ngaphandle kokufuna ukuqesha abantu abaninzi.
Ngenxa yenguqu yedijithali, izixhobo ezinjalo zifumana usetyenziso olubanzi kushishino lokhenketho nakwezokhenketho.
U-Regiondo uthi wenze eyona nkqubo ibalaseleyo yokubhukisha kwi-Intanethi kwaye wabonelela ngesingeniso kwiiNkqubo zeNgcaciso yeNgingqi kukhenketho kunye nemisebenzi.
Sibuze iqela labakhenkethi malunga nezixhobo ezikwi-Intanethi ezingenakuphila ngaphandle kwazo.
URegondo wabelana ngeziphumo zabo ukunceda amashishini ukuba asebenze ngokukuko kwaye axhumeke ngcono.
Iinkqubo zokubhukisha zibonelela ngesisombululo sesoftware esivumela abathengi abanokubakho ukuba babhukishe kwi-intanethi kwiwebhusayithi yakho kunye nezinye iindlela. Kodwa zeziphi ezizezona zibalaseleyo kwintengiso?
Nantsi intetho yeNgingqi:
Sisenokuba nekhethe elincinci, kodwa siyazithanda iimveliso zethu kwaye sisebenza nzima ukuqinisekisa ukuba sinakho ukuhambisa esona sisombululo sokubhuka kwintengiso.
Siqale uhambo lweRegiondo ngo-2011 eMunich, eJamani, kwaye sisebenze ngaphezulu kwe-8,000 yokhenketho oluhle kunye nabanikezeli bemisebenzi kwihlabathi liphela ukusukela ngoko.
Abathengi bakho kunye nabasebenzi baya kuluthanda uyilo loMmandla. Kulula ukuhamba ngendlela ukuze ungene ngaphakathi ngaphandle koqeqesho.
Nokuba uthengisa amatikiti angama-50 okanye ama-500,000 ngonyaka, i-Regiondo yakhelwe ukwenza ubomi bakho bube lula. Ubungcali bethu kunye neempawu eziphambili zilungele ukuphatha imiqulu emikhulu.
Isoftware yeNgingqi yokugcina umkhondo wakho konke ukubhukisha. Ukuthengisa ngaphandle kweintanethi, kwi-Intanethi, kunye neqabane kubhalwa ngokulula, kugcinwa kwaye kuhlalutywe.
Kutheni ukhetha i-Regiondo?
Konke ukubhukisha kwinkqubo enye kukunceda ukuba:
• Yandisa ukuthengisa • Gcina oovimba • Lawula imisebenzi
✓ Phila ulawulo lwempahla yexesha lokwenyani
✓ Ulawulo lwezixhobo ezinokuthenjwa nezisembindini
✓ Sikunceda ukuba ukhule ngokukhawuleza ngaphandle kweendleko zotyalo-mali
✓ Silelona qonga liphezulu lemiqulu ephezulu yokubhukisha
✓ Sinonxibelelwano lomsebenzisi olunomdla.
✓ Sikunika ulawulo olupheleleyo kwinkangeleko kunye nokuziva kwivenkile yakho yetikiti elikwi-Intanethi.
✓ Ukubhabha kunye neqela lenkxaso elihlala lilungele ukunceda.
✓ Isoftware yethu ilungiselelwe ukuguqulwa
✓ Qhagamshela kwii-OTA ezinkulu kunqakrazo olunye
Ngaba ufuna ukubona iRegiondo isebenza? Gcwalisa ifom yethu ukucela idemo yakho yasimahla kunye nohambo lwemveliso!
I-FareHarbor yenza izixhobo ezinamandla ezinceda ukhenketho kunye nabaqhubi bomsebenzi ukuqhuba ishishini labo ngokulula nangokufanelekileyo. Banikezela ngesoftware yokubhukisha kwi-Intanethi kunye nezixhobo zokhenketho kunye neenkampani zomsebenzi.
Ngeqela labathandi be-adventure, abathetha iilwimi ezininzi ezivela kwihlabathi liphela, iFareharbor ithembisa ukukunceda ukhule.
Kutheni ukhetha iFareHarbor?
Inqanaba lamashishini, isoftware ebuyelweyo enomsebenzisi
✓ 24/7 inkxaso kunye noqeqesho lomntu ngamnye.
Siza kugqithisela ukubhukisha kwexesha elizayo kwaye sihlaziye iwebhusayithi yakho.
✓ Yandisa ukufikelela kwakho ngamajelo osasazo asasaziweyo
✓Siyinkampani ekhula ngokukhawuleza kwimisebenzi nakwimizi-mveliso yokhenketho
Ukufumana idemo ephilayo kwaye ubone indlela iFareHarbor enokukusebenzela ngayo, ngokulula gcwalisa ifom kwiwebhusayithi yabo.
IBokun yinkampani yaseTripAdvisor enikezela Injini yokubhukisha kwi-Intanethi, Ulawulo lweShaneli, uLuhlu lweeNdawo kunye noLawulo lweZibonelelo, indawo yentengiso ye-B2B, iNgxelo, kunye neeWebhusayithi zokhenketho kunye namashishini omsebenzi.
Kutheni ukhetha iBókun?
Sinceda ukuba uqale kwaye ukhule ukhenketho lwakho kunye nemisebenzi yeshishini.
Ings Fumana ukubhukisha okungaphezulu: thengisa kumajelo amaninzi njengoko ufuna, ukufikelela kubathengi kwihlabathi liphela
Gcina ixesha: yandisa ukusebenza kwakho kakuhle kwaye ulawule imisebenzi yeshishini lakho endaweni enye
✓ Khulisa ishishini lakho: jonga amathuba okuba ukhulise ukuhambisa kwakho, wandise imveliso yakho, kwaye wakhe imithombo yengeniso entsha yeshishini lakho
Ukuba ufuna ukuqala ukusebenzisa iBókun kufuneka wenze njalo bhalisela uvavanyo lwabo lwasimahla.
Indawo engaphambili yokujonga isoftware esekwe kulawulo yeshishini eyilelwe abaqhubi bezokhenketho, iinkampani eziqeshisayo kunye nababoneleli ngendawo yokuhlala.
Kutheni ukhetha ukuKhangela?
Ungaze uphoswe yenye yokubhukisha: thatha ukubhukisha kwiwebhusayithi yakho naninina, naphina ngokufumaneka kwekhalenda ebukhoma
Yithi ndlela-ntle kwizipredishithi: Gcina umkhondo wokubhukisha kwakho, lawula ukubhukisha kunye nokufumaneka, kwaye ufumane ukuqonda okwenyani kwishishini lakho kuyo yonke idashboard esembindini
Sika umthwalo wakho kwisiqingatha: zenzekelayo imisebenzi yakho ephindaphindwayo
Indawo yokujonga ngaphambili inikezela ngeentsuku ezingama-21 zesilingo sasimahla ke ukuba unomdla wokufikelela kwiimpawu kunye nenkxaso, nje ukudala iakhawunti. Akukho khadi lamatyala Iyafuneka.
I-Redzy sisoftware yokubhukisha ezimeleyo kunye neqonga lokuhambisa, eliyilelwe abaSebenzi boKhenketho kunye noMsebenzi.
Kutheni ukhetha iRedzy?
✓ Ngokuzenzekelayo imisebenzi yeshishini
✓ Ulawulo lweselfowuni kunye nolwahlulo oluninzi
✓ Cofa indawo enye yokwenza iwebhusayithi
✓ Ingxelo yeshishini ephezulu
✓ Indalo ebonakalayo yendwendwe
✓ Ukudityaniswa okuninzi: (Zapier, TripAdvisor Review Express, Ivenkile kaFacebook nangaphezulu).
✓ Amaxabiso exesha langempela kunye nolawulo lwamaxabiso
Ukuqala utshintsho lwakho ngeRedzy ungabhalisela eyabo Uzamo lasimahla. Akukho khadi lamatyala Iyafuneka.
I-Trekksoft sisisombululo esiphambili sokubhukisha kwiiNkampani zoKhenketho zoSuku.
Kutheni ukhetha iTrekksoft?
Thengisa ezinye iiholide ngokudibanisa isiphelo sangaphambili kunye nentengiso yasemva
Lawula imisebenzi ngolawulo oluzenzekelayo kunye nemisebenzi yesandla
Khulisa ishishini lakho ngokudibanisa nabathengi kwihlabathi liphela
Ukucela idemo kunye neqela labo lophuhliso lweshishini, kuya kufuneka Cwangcisa umnxeba wedemo.
Iinkqubo zoLawulo lweeMxholo
Izixhobo ze-CMS zibonelela ngesisombululo esifikelelekayo nesikhuselekileyo kubanini abafuna ukufumana ulawulo kwiwebhusayithi yabo kwaye baphathe yonke imixholo ngaphakathi endlwini. Masifumanise ukuba zeziphi ezona zikhetho zintathu ze-CMS zabaqhubi bezokhenketho.
I-WordPress yeyona nkqubo ithandwayo yasimahla nesimahla evulelekileyo emhlabeni. Isebenziseka lula, inokwenziwa ngentando yakho yonke, kwaye kulula kakhulu ukuyifunda. NgeWordPress, ungakha iwebhusayithi, uqalise ibhlog, kwaye uthengise kwi-Intanethi.
Kutheni ukhetha iWindowsPress?
✓ WordPress khululaKufuneka uhlawule ukubamba
✓ Kulula ukuyisebenzisa nokufunda; akukho lwazi lokufaka iikhowudi olufunekayo
✓ I-WordPress ikunika ulawulo olupheleleyo lwewebhusayithi yakho; yenziwe ngokwezifiso kakhulu, kwaye unolawulo olupheleleyo kwindawo yakho kunye nayo yonke idatha yakho
✓ Amandla ayo okubloga akhelwe ngaphakathi kwaye kulula ukuwadibanisa
✓ Unokwandisa ngokulula ukusebenza kwendawo yakho ngeeplagi
✓ Amawaka afikelelekayo (ezinye zazo zisimahla) imixholo enokwenziwa ngokwezifiso iyafumaneka kwi-Intanethi
Iiwebhusayithi zeWordPress zezi I-SEO inobuhlobo kwaye iyaphendula
✓ Unokufikelela kwi ii -apps zeselfowuni zokulawula indawo yakho ekuhambeni
✓ Inkqubo ibonelela ngolawulo olunamandla lweendaba
✓ Ukusebenza okuphezulu kunye nokhuseleko
Ukuqalisa iwebhusayithi yakho okanye iblogi, yenza iakhawunti yeWordPress.com!
I-squarespace yinkqubo yolawulo lwento yonke inye ebonelela ngokwakha iwebhusayithi, ukubamba kunye nesisombululo se-E-yorhwebo.
Kutheni ukhetha i-squarespace?
✓ Yenye yezona webhusayithi zilula ukusebenzisa
✓ Iitemplate zewebhusayithi eziphezulu ziyafumaneka kwiindidi ezahlukeneyo zewebhusayithi phakathi kweephothifoliyo, iibhlog, iphepha lokufika, kunye neevenkile ezikwi-Intanethi.
✓ I-SEO eyakhelweyo
✓ Ujongano lomsebenzisi olula
SSL I-SSL ESIMAHLA iziqinisekiso
✓ Uyilo oluphendulayo lokujonga eselfowuni
✓ 24 / 7 inkxaso Customer
✓ Intengiso ye-E edibeneyo
Ku Qalisa nge-squarespaceKuya kufuneka ukhethe itemplate elungele ishishini lakho kwaye emva koko wenze iakhawunti. Isithuba esifanelekileyo AYI ube nesicwangciso sasimahla ke xa iwebhusayithi yakho ikulungele ukumilisela kufuneka ukhethe isicwangciso kwaye ubhalise.
Ukuhamba kweWebhu sisisombululo se-hybrid phakathi kwesixhobo sokwakha iwebhusayithi njenge-squarespace, iinkqubo zolawulo lomxholo weklasikhi ezinje ngeWordPress, kunye neewebhusayithi ezinekhowudi enzima (okanye iiwebhusayithi ezingezizo ze-CMS).
Kutheni ukhetha ukuhamba kweWebhu?
✓ Zonke kwiqonga elinye lokudibanisa i-CMS, izixhobo zentengiso, i-backups, kunye nokunye
✓ Ukuhamba kweWebhu kukunika inkululeko yokwenza iiwebhusayithi ezenzelwe wena ngokupheleleyo: hlengisa yonke into ukusuka ekulandeleleni ukuya kubude obude kunye nokuhlaziya imeko nganye yombala ngemizuzwana
✓ Iseyile ebonakalayo ngokupheleleyo ayifuni kukhowudwa
✓ Tsala kwaye ulahle ukusebenza komakhi wephepha
✓ Unokwenza ngokulula oopopayi kunye nonxibelelwano
✓ Uyilo lwephepha eliphendulayo
✓ IiWebhusayithi zeWebhu zinobuhlobo kwi-SEO
✓ Mema abahleli kunye nabasebenzisana nabo ukuba bongeze kwaye baphonononge umxholo kwiwebhusayithi yakho
✓ Isisombululo esinamandla sokubamba
✓ I-SSL EMAHLA iziqinisekiso
✓ Simahla ude ukulungele ukwazisa
Ukuphonononga iqonga, kuya kufuneka Sayina iakhawunti yasimahla yeWebhu kwi-Intanethi.
Izixhobo zokuthengisa zikunceda ukuba ulungiselele inkqubo yakho kwaye ukhulise ingeniso ngelixa ugcina yonke idatha yabathengi igcinwe ngokukhuselekileyo kwaye iququzelelwe. Qhubeka ufunda ukuze uphonononge ezo zisetyenziswa ngabakhenkethi kunye nabanikezeli bemisebenzi.
I-Apollo liqonga lokuzibandakanya eliza kukunceda usebenze, uhlalutye, kwaye uphucule isicwangciso sakho sokukhula.
Kutheni ukhetha uApollo?
✓ I-Apollo ikunceda ukubetha inombolo yakho
✓ Fumana ithemba lakho elifanelekileyo kunye nezikhokelo ezintsha
✓ Sebenzisa i-imeyile kunye nemikhankaso yokufowuna
✓ Misa iintlanganiso
✓ Hlalutya kwaye ulungise inkqubo yakho
✓ SIMAHLA isicwangciso kunye nedemo yesoftware ekhoyo
Ukulungele ukuzama uApollo? Faka i-imeyile yakho yomsebenzi kunye qalisa fREE. Unako kwakhona fumana i-DEMO ukubona indlela uApollo azinceda ngayo iinkampani ukuba zakhe inkqubo ephindaphindayo yokubeka iintlanganiso, ukuvala ingeniso, kunye nokuhlalutya iindlela zokuthengisa kunye nezentengiso.
I-Qwilr yisoftware yanamhlanje yamaxwebhu esoftware ngokudityaniswa kunye neetemplate. Unokwenza izindululo ezibandakanya ukunceda ukuvalela ngakumbi ukujongana.
Kutheni ukhetha iQwilr?
✓ Yenza izindululo zesiko ngonqakrazo olunye ngaphandle kokushiya iCRM yakho
✓ Tsala idatha yamaxabiso ngokuthe ngqo kwiCRM yakho
✓ I-Qwilr ibonelela ngezindululo ezahlukeneyo zokubandakanya iziphakamiso esele zenziwe kunye nethala leencwadi lezinto ezinokuphinda zisebenze ukwenza izindululo ezibalaseleyo ezihambelana nezikhokelo zakho zophawu
✓ Unokwenza imibuliso yevidiyo edibeneyo, izifundo zetyala, okanye iidemo zemveliso
✓ Unokunceda abathengi ngesibali sokubala se-ROI kunye nezicatshulwa ezinokwenziwa ngokwezifiso
✓ Iinkcukacha zephepha elinenkcukacha ezikhoyo
✓ Unokongeza ukuvuma kwe-e-sign
W I-Qwilr iyakunceda Yenza ii-invoice kwaye unokudityaniswa kwiinkqubo ezahlukeneyo zokuhlawula
Ungazama iQwilr ye fREE okanye ucele idemo yasimahla kwiwebhusayithi yabo-nje bhalisela iakhawunti yeQwilr.
Izixhobo zokuthengisa ezizenzekelayo zikunceda ukuba usebenze ngokufanelekileyo ngakumbi ngokonga ixesha kunye nokuququzelela amaphulo akho kwangaphambili. Makhe sijonge ukuba zeziphi ezisebenza kakuhle kwiinkampani zokuhamba nezokhenketho.
IMailchimp liqonga lokuthengisa elizenzekelayo elibonelela ngentengiso ye-imeyile, ukwakha iwebhusayithi, kunye neenkonzo zentengiso yedijithali. Ikuvumela ukuba uzise idatha yabaphulaphuli bakho, amajelo entengiso, kunye nokuqonda kunye.
Kutheni ukhetha iMailchimp?
✓ Yakha ii-imeyile, iintengiso zentlalo, amaphepha okufika, amakhadi eposi, kunye nokuninzi ukusuka kwindawo enye
✓ Izixhobo ezilula zokuyila kunye neetemplate eziguqukayo kwii-imeyile zakho, amaphepha okufika kunye neefom
✓ Umncedisi we-AI onikwe amandla okudala ukuvelisa uyilo lwesiko
✓ Gcina yonke idatha kunye nokuqonda kwakho kwindawo enye
✓ 24/7 inkxaso Inkxaso yokuphumelela
✓ Ukudityaniswa kwe-250 + usetyenziso ukudibanisa zonke izixhobo zakho kwiMailchimp
✓ Ulawulo lwezinto ezithembekileyo
Unga Qalisa nge-MailChimp kwiwebhusayithi yabo kwaye bakhuphele usetyenziso lwabo lweselfowuni lwe-Android okanye i-iOS. Kukho nesicwangciso sasimahla- ungathumela ukuya kuthi ga kwi-imeyile ezingama-10,000 ngenyanga kunye ne-2,000 ngosuku simahla.
Ubungqina sisixhobo esifanelekileyo sokwakha ukuthembela kwibrendi yakho. Ivelisa i-popup kwiwebhusayithi yakho ebonisa ukutya okuphilayo okanye inani elipheleleyo labantu bokwenyani abasandula ukuthatha inyathelo okanye abatyelele indawo yakho. Ngokudibanisa kwitoni yakho yentengiso ungaguqulela ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-300 kwiindwendwe ezikhokelayo, iidemo kunye nentengiso.
Sebenzisa Ubungqina ku:
Yenza ukunqongophala ngokuBala kwabaTyeleli ngoku
Yakha ukuthembeka ngeMigca eshushu
Yomeleza ukuzithemba ngomsebenzi wamva nje
Kutheni ukhetha ubungqina?
✓ Kulula ukumisa
✓ Iisetingi zesiko
✓ Uhlalutyo oluhle
✓ Umdibaniso weZapier
✓ Isantya sokulayisha esikhawulezayo
✓ A uvavanyo / B
Ngokwangoku banikezela nge1 inyanga fREE -Ufuna ukufaka ipikseli yobungqina kwiwebhusayithi yakho (nantsi indlela) kwaye ubone ukuba ikufumanela ukuthengisa ngakumbi.
I-Buffer sisixhobo sokucwangciswa kwemidiya yoluntu esisetyenziswa ngaphezulu kwamashishini angama-75,000 kwihlabathi liphela. Ukongeza kulungelelwaniso lwamaphulo akho, ungasebenzisa iBuffer ukulinganisa kunye nokunika ingxelo ngokusebenza kwayo kunye nokufikelela.
Kutheni ukhetha iBuff?
✓ Cwangcisa kwaye ucwangcise amabali akho e-Instagram kwiwebhu okanye kwiselfowuni
✓ Qhagamshela "ikhonkco kwi-bio" kwii-URLs ezininzi ezijongwa kwiphepha elinokuthengwa
✓ Faka ingxelo yokuqala xa ucwangcisa iiposti ze-Instagram
✓ Yenza, gcina kwaye ucwangcise ii-hashtag ukuze uzisebenzise kwizithuba zakho ze-Instagram
✓ Yongeza indawo okuyo kunye neethegi zomsebenzisi njengoko ucwangcisa izithuba kwi-Instagram
✓ Linganisa ukusebenza kwamabali, izithuba ezizodwa, kunye nee-hashtag
✓ Yakha iingxelo zesiko kwaye wabelane ngokulula neqela lakho
✓ Yonwabela fREE iplani
Fumana iimpendulo kwimibuzo eqhelekileyo malunga nesicwangciso sakho seendaba zentlalo
Ukuba ufuna ukuphonononga izinto ezintle zeBuffer khetha nje isicwangciso esivumelana neemfuno zakho kunye qala ityala lakho lasimahla.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho kugxilwe kuthi kwizixhobo zolawulo lweprojekthi. Ukulawula zonke iinkqubo kunye nokuhamba komsebenzi kubalulekile kubakhenkethi nakwababoneleli bemisebenzi. Kwaye izixhobo zolawulo lweprojekthi ziphakathi kweyona ndlela yokuqinisekisa ukuba zonke iinkqubo zilandelwa ngokungqongqo. Ukongeza, zilungile ukugcina iqela lilungelelanisiwe ngelixa lisonyusa ukusebenza kwabo ngokukuko.
Fumana okuninzi malunga neenkqubo zolawulo lomxholo owuthandayo wasemsebenzini kunye nabanikezeli bemisebenzi.
I-Asana yiwebhu enakho ukwenziwa kunye nesicelo esenziwe ngefowuni eyilelwe ukunceda amaqela ukuba alungelelanise, alandele, kwaye aphathe umsebenzi wawo.
Ikuvumela ukuba udilize iiprojekthi zakho kunye nokusebenza okuphindayo kwimisebenzi enokulawulwa, nganye inomhla wayo omiselweyo, ii-subtasks, assignees, kunye nezinye iimpawu.
Ngayo Iibhodi zaseKhanani, UAsana ngoku ubhetyebhetye ngakumbi ukuze ukwazi ukucwangcisa ukuhamba kwakho kweyona ndlela isengqiqweni yeshishini lakho. Yijonge kwividiyo engezantsi:
Kutheni ukhetha u-Asana?
✓ Hlela umsebenzi wakho kwiiprojekthi ezabelwana ngazo njengoluhlu okanye iibhodi zeKhanban
✓ Jonga iindawo zokujonga ezibalulekileyo kwiprojekthi yakho ukulinganisa nokwabelana ngenkqubela phambili
✓ Nika imisebenzi umnini ocacileyo, ukuze wonke umntu azi ukuba ngubani onoxanduva
✓ Yaphula imisebenzi kwi-Subtasks kunye namaCandelo
✓ Yenza iiprojekthi ngokwezifiso ngamasiko oSiko
✓ Nxibelelana ngaphakathi kwemisebenzi
✓ Thumela iposi uhlaziyo
✓ Vumelanisa uAsana namanye amaqonga.
Ungasayina kwiAsana.com kwaye usebenzise isixhobo simahla ukuya kuthi ga kumalungu eqela ali-15. Iimpawu ezithile eziphambili zitshixiwe kodwa uya kuba nayo yonke into oyifunayo ukuze uqalise kwisicwangciso sasimahla. Kukho uguqulelo lweselfowuni olufumanekayo lwe-Android kunye ne-iOS yokugcina umkhondo wezinto ekuhambeni.
Ngokufanayo no-Asana, iTrello liqonga lolawulo lweprojekthi yeqela. Nangona kunjalo, eyona nto kugxilwe kuyo kwiibhodi ze-kanban kunye nokusetyenziswa ngokulula.
Kutheni ukhetha iTrello?
✓ Ujongano olulula olubonakalayo kunye nokusebenza okunomdla kokutsala kunye nokwehla
✓ Amandla okudibanisa anamandla-ukudibanisa izixhobo zokusebenza eziphezulu
✓ Akukho khowudi ezenzekelayo
✓ Ukuququzelela unxibelelwano olulula phakathi kwamaqela
✓ Amakhadi analo lonke ulwazi oludingayo
Yile nto siyisebenzisayo kwi-Regiondo ukugcina umkhondo womsebenzi wethu kuyo yonke inkampani. Ngabasebenzi abangaphezu kwama-50, sisebenzisa iTrello ukuvumelanisa iiprojekthi kumasebe ohlukeneyo ukuze sikwazi ukwakha ngokufanelekileyo nokuhambisa inkqubo yethu yokubhukisha kwi-Intanethi.
Ukuqala ukusebenzisana kunye nokulawula iiprojekthi zakho kunye neTrello, ngokulula bhalisa nge-imeyile yakho kwiwebhusayithi yabo.
UMvulo.com yenye yewebhu enokwenziwa ngokwezifiso kunye neqonga lolawulo lomsebenzi weselfowuni kunye nenye indlela edumileyo eya kuAsana. Isetyenziswa yiAdobe, iWix, iUniversal, iWalmart, kunye nezinye iimveliso zehlabathi.
Kutheni ukhetha uMvulo?
✓ Kulula ukuyisebenzisa-cwangcisa iibhodi zeprojekthi ngokukhawuleza
✓ Iluncedo kwaye kulula ukulandela izifundo ezifumaneka kwisiseko solwazi
✓ IiBhodi zobuqu nezoluntu
✓ Unxibelelwano olusebenzayo kunye nezaziso zokwenza umsebenzi (maka abantu kwaye ufumane izaziso xa umakiwe)
✓ Ungashiya amagqabantshintshi aphilayo kwizinto ezibonakalayo
✓ Unokukopa kwaye uncamathisele kwiAdobe
✓ Ireyithi yokuHlola ephezulu kunye neNgxelo
✓ Inkxaso iyafumaneka kubo bonke ababhalisile kwaye hayi abathengi beprimiyamu kuphela
Ukuba unomdla ngoMvulo, nje landela ikhonkco ukuqala ngamanyathelo ambalwa alula
Izixhobo zesoftware eziyilelwe kwaye zisetyenziswa lushishino lokuhamba zithandwa kakhulu ngesizathu. Banceda amawaka amashishini enze ngaphezulu nangaphezulu kokulindelweyo yonke imihla.
Siyathemba ukuba ukhetho lwethu luyakunceda ufumane ezifanelekileyo kutyelelo lwakho okanye kwinkampani yomsebenzi kwaye ekugqibeleni uphucule unxibelelwano lwabathengi kunye nokusebenza kwangaphakathi.